rafozan-doza | Novambra 2011 | 6
Ny tena mampitovy ny tolona hoan'ny fahafahana rehetra na ny lohataona arabo izany na ny tolona rehetra nifanesisesy teto @ tanana dia ny hoe voalohany indrindra dia hoe ny vahoaka no nitroatra nitokona tsy nanaiky ny didy jadona intsony. Faharoa, tsy maintsy nisy mpitarika, leader, ny tolona ary fahatelo farany dia ny hoe tsy maintsy misy olona mamoy ny ainy ao... Io fahatelo farany io ny tena tiako resahina eto.
Voalohany indrindra aloha dia hoe azo lazaina hoe "hero" izy ireny, olo-manga sa inona ny filazana izany. Hoe mamoy ny ainy hoan'ny tolona sy ho fahafahan'ny mpiara-belona. Eny e, tsy maintsy controversial ny fandraisan'ny tsirairay an'ilay izy miankina @ hoe aiza ny lafiny misy anao. Ny sasany hiteny hoe martiry sy hero moa ny sasany hiteny hoe vahoaka vendra-po manaiky hambakain'ny mpanongam-panjakana...
Tsy dia izay loatra anefa no tena tiako hahatongavana fa hoe @ resaka aram-pinoana. Manota ve ireny olona sa ahoana ozy nareo? Satria raha hoe minia mande any @ toerana hahafaty azy ny olona iray eny fa na dia hoe manam-pinoana sy hoe mieritreritra ny manana ny rariny tahaka ny inona aza dia mbola karazan'ny hoe indirectement mamono tena ihany izany... Ohatra hoe ny t@ 10Aout izao efa fantatra fa nasian'i deba mines teny Iavoloha ka ra mbola milingilingy makany ianao dia efa karazan'ny hoe mamono tena ihany izany ee, eny fa na dia nandositra aza refa notifirin'lery t@ helicoptera... Misy koa ny cas tonga dia tsy azo asiana fieritreretana akory, toy ny an'ilay bandy tany Tonizia iny hoe kivy sy leo tanteraka lery dia nodorany ny tenany hoe tena aleoko maty toy izay hoe andevozinareo sy anaovanareo ny kely tsy mba mamindro eto lava izao.
Amin'ny lafiny iray ihany koa anefa, ny tolona dia fihetsehana ampilaminana ary natao hiadiana @ tsy rariny. Hilazana hoe ampy izay fa misy fetra ny zava-drehetra. Fanaikezana ny hamoizana ny aina hoan'ny fahafahan'ny mpiara-belona izany io. Ozy hoe tsy misy manam-pitiavana, toy izay mahafoy ny ainy hoan'ny namany... Eo rahateo koa ny hoe misy ny ohatra ao @ baiboly hoe t@ jiosy nandevozina tany Ejypta ary nohirahina i Moizy hanafaka azy ireo, poinsa bobaka ihany ny jokotra t@ izany. Izany hoe azo ekena ihany ny fahatesana @ finoana @ zavatra na hoe cause iray.
Ny tena mampieritreritra kely @ ity kozy ity manko dia hoe raha misy ny fitokonana sy tolona iray izay ekenao sy iombonanao ny tanjona aminy, tokony handray ve enao sa tsia? Mazava fa ra mandray anjara enao dia efa karazan'ny mamono tena ihany. Enfin, tsy ny olona rehetra akory noho ho faty fa tsy maintsy misy ho faty foana ao aloha ee... Sa hoe tsy handray anjara? dia @ izay anefa mitohy ny fahoriana sy hoe mampahory ny mpiara-belona ihany koa ary indrindra hoe mamitaka sy mandainga @ ny tenanao ihany enao raha zavatra hitanao fa tokony hiadiana no odinao fanina fa kely endaka...
Mampatsiaro an'ilay fiten'i Martin Niemöller malaza iny hoe t@ adilehibe faharoa t@ androny fanenjehana nataon'i Hitler dia hoy izy:
Voalohany aloha, tonga izy haka ny kaoministra dia tsy niteny ah satria tsy kaominista tsin.
Dia avy eo izy tonga haka ny syndicalista dia tsy niteny ah satria tsy mpikambana @ syndicats.
Dia avy eo izy tonga haka ny jiosy, dia mbola tsy niteny ihany aho fa satria za tsy jiosy.
Farany izy tonga haka ahy, dia tsisy olona tavela intsony tao afaka ny mba hiteny ho ahy
aia ty hombagna!!﻿
11/07,2011 Sokajy Rediredy